Wararkii ugu dambeeyay: Wasiir katirsan dowladda Faransiiska oo Carona Virus laga helay iyo tobanaan ku dhimatay Spain.
Tuesday March 10, 2020 - 08:18:30 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Cudurka dilaaga ah ee Carona Virus ayaa wali si xowlli ah ugusii dhax fidaya wadamada qaaradda Yurub iyo mandiqadda Bariga dhexe halka uu kasii yaraanayo wadanka Shiinaha.
Wararka ka imaanaya qaaradda Yurub ayaa sheegaya in cudurku uu tobanaan qof ku dilay wadamada Talyaaniga iyo Spain, wasaaradda caafimaadka Spain waxay sheegtay in 28 qof ay udhinteen Carona halka boqolaal kale ay la ildaranyihiin.
R/Wasaaradaha Talyaaniga ayaa warbaahinta u sheegay in uu amar ku bixiyay in dhammaan shacabka wadankaas ay karaantiil ku yihiin guryahooda, waxaa lamamnuucay in dadku isla raacaan tareennada iyo gaadiidka.
Dadka Talyaaniga ee udhintay cudurka Carona Virus ayaa gaaraya 436 qof halka ay isbitaallada jiifaan 9000 oo qof, wadanka Shiinaha shalay waxaa Carona udhintay dad gaaraya 17 qof iyadoona madaxweynaha Shiinaha uu booqashadiisi ugu horraysay ku tagay magaalada Wuhan oo aheyd meeshii ugu horraysay ee Carona uu dad ku dilay.
Dalka Mareykanka 26 qof ayaa cudurka Carona udhintay badankoodna waxay ku dhinteen magaalada Washington ee caasimadda ah, Donald Trump ayaa diiday in cudurka laga baaro ama xaalad karaantiil ah lageliyo.
Dhinaca kale wasiir katirsan dowladda Faransiiska ayuu asiibay cudurka Carona sida lagu sheegay warbixin kasoo baxday aqalka madaxtooyada Paris, Franck Riester oo ah wasiirka dhaqanka Faransiiska oo 46 sana jir ah ayaa laga helay Carona waxaana ladhigay isbitaal lagu karaantiillo dadka cudurkani uu soo ritay.